“Haddii Aanu Siidhi-wadaha Ciyaartu Awood U Lahayn in Uu Kaadh CAS Bixiyo, Dhibaato Ayey Leedahay” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Haddii Aanu Siidhi-wadaha Ciyaartu Awood U Lahayn in Uu Kaadh CAS Bixiyo, Dhibaato Ayey Leedahay”
“Qofka Jannada Laga Waayaa Laangaab Ahe Dadka Reer Gabiley Ee Degen [Xaafadda Xawaadle] Waa Kuwa Ugu Qaadhaan Bixinta Badnaa”
“Komishanka Waxaan Leeyahay, Shacabku Ma Doonayaan IN Mar 2aad La Kordhiyo [Muddo-Xilleedka Xukuumadda] Ee Waxay Doonayaan…” Sheekh Aadan-Siiro
Hargeysa (Hubaal) – Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro) oo Boqollaal ka mid ah Dadweynaha Caasimadda Hargeysa Salaaddii Ciidda ee Arbacadii Toddobaadkii hore ku Tukiyey Garoonka Kubadda Cagta ee Xaafadda Xawaadle, ayaa khudbad Baraarujin ah oo uu Dadweynaha u jeediyay kaga hadlay Marxaladda Somaliland Mareyso, Doorashooyinka soo foolka leh, Heshiiska Maalgelinta Dekedda Berbera ee Xukuumaddu la gashay Shirkadda Carbeed ee DP World iyo Arrimo kale oo muhiim ah.
Ugu Horeyn Sheekh Aadan waxaa uu u Mahad naqay Dadka dhalasho Ahaan Ka Soo jeeda Gobolka Gabiley ee degan Degmada 26-june ee Magaallada Hargeysa, kuwaas oo uu ku tilmaamay in ay kaalinta koowaad ka galeen qaadhaan loo ururinayay xabaallo cusub oo laga qorsheeyey waqooyiga Hargeysa. Waxaa kale oo uu sheekhu u mahad naqay Beesha uu ka dhashay ganacsade Cali Maaweel oo uu sheegay in ay iyaguna kaalinta labaad u galeen bixinta taborucaadkaas. “Halkan waxaan uga mahad naqayaa oo aan idiin sheegayaa gobolka Gabiley dadkau dhashay dembigooda iyo ka waalidkoodba illaahay ha dhaafo, waad ogtihiin oo gobolka Gabiley waxaa uu kamid yahay gobollada ayu dhasheen dadka degan meeshan aan ka hadlayo [xaafadda Xawaadle ee Hargeysa]. Runtii reer Gabiley iyaga oo deegaankan Hargeysa looga badan yahay haddana waa dadka ugu qaadhaanbixin badnaa [contrabution] Xabaallaha cusub. Adeerrayaal arrintu xoog maaha, magac maaha, magacyo hore iyo kuwo dembana maaha, laakiin annaga taladayadu waa qofkii Janada laga waayo ayaa laangaab ah”. Sidaa ayuu yidhi Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi (Aadan-Siiro), waxaana uu intaa ku daray “Annagu waxaanu barbar taagannahay qofka kheyrka u ololleeya cida uu doono ha noqdee. Waxaa kale oo aanu halkan uga ducaynaynaa reerka uu ka dhashay Cali Maaweel [Ganacsade Bulshada dhexdeeda Magac ku leh] waa reerka labaad ee ugu qaadhaan bixinta badan, dembigooda Illaahay ha dhaafo ka waalidkoodna ha dhaafo. Annagu dadka wanaagsan waanu dhiirinaynaa inta kalena waxaanu leennahay waar halkani waa halkii waalidkaa iyo ehelkaaga cidda aaad ugu jeclayd lagu aasayay”. Ayuu yidhi sheekhu, Waxaanu u duceeyey dadkii ka qayb qaatay tabarrucaadkii lagu iibiyey dhulka loo qorsheeyey in ay xabaallaha cusubi noqdaan halkaas oo haatan ay qaybo kamid ahi dhiman yihiin nidaamintoodu.
Dhinaca kale Aadan Siiro waxaa uu ka hadlay arrimaha doorashada iyo heshiiska DP World iyo Xukuumadda ee Dekedda Berbera, waxaanu farriin u diray komiishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland oo uu sheegay in Dadka u dhuun-daloola arrimaha Doorashooyinku shaqadooda dhaliillayaan, waxaanu yidhi, “Waxaanu farriin u direynaa Komiishanka Qaranka oo ay ku soo fool-leedahay Hawl adag ah oo Doorashooyin ah oo Dadku ku kala Nabad-gelayaan. Maxaynu ku dooranay Doorashooyinka?. Waxaanu nahay Dadka taageersan (Doorashooyinka) si aanu dhib u dhicin oo Dadku u tartamaan si xor iyo Xalaal ah, iyadoon Boob jirin, Khiyaamo jirin, iyadoo aanay jirin in kolba Xisbiga Talada hayaa uu isticmaalo awoodda uu leeyahay, Markaa Komiishanka waxaanu kula talinaynaa inay ka dedaalaan inaan mar dambe la kordhin (Wakhtiga Xukuumaddu Xilka sii hayneyso) sida Dad badan oo u dhuun-daloolaa Saadaalinayaan.”